Waxaa laga yaabaa inaad ku arkay version dadii oo caraysan of King Kong filimada iyo taxanaha khayaalka. Laakiin waxa haddii Kong ugu weyn oo xoog leh soo baxday in ay si dhab ah funny iyo xanxantayn dareenno? Well, in uu yahay dhab ahaan waxa King Kong Cash ayaa dukaanka kuu. Kuwani naadi bonus cusub online kulanka ayaa lagu wadaa in hortegi lahaa ee hawdka ah style cartoon qurux badan. Waxaad dareemi kartaa kursi dhagax ama halkii carshi meesha King Kong fadhiya taaj oo madaxiisay saareen. Waxa uu keenay wajji ekaysiiyaa nin boqor ah ee kaymaha laakiin run ahaantii waa nin funny in kulankaan. Iyada oo qaar ka mid ah muuqaalada animation iyo gunno runtii qabow, aad hubto in ay ku dhici jacayl la kulankaan. Si aad u ciyaaro, waa in aad ka £ 0.10 iyo £ 500 wareejin kasta dooran lacagta sharadka aad meel kasta.
Tani muuqaal cajiib ah naadi bonus cusub online kulanka waxaa la soo saaray by Print Blue. Mid ka mid ah horumarinta ee adduunka ee casinos online. Waxay leeyihiin in ka badan toban sano oo waayo aragnimo ah ee abuuraya category a kala duwan oo kulan in ay gacan ka geysatay dadka ka dhigi qaar ka mid ah lacagaha dhabta ah.
From guudmar, kulan uu u muuqdo mid cajiib ah oo leh muuqaallo hodan iyo tayo sare leh maqal iyo video interface. Calaamooyinka ciyaarta waa mid aad u midabo iyo bixiyaan animation on guuleystay. Waxay yihiin logo ciyaarta, baqbaqaaq, shabeel, wiyisha iyo Yaxaas. logo waxay bixisaa lacag sare ee 500x dul shan ka mid ah ay soo degtey nooc on duntu ku. Calaamooyinka qiimaha of this hoose naadi bonus cusub online kulanka waxaa kaararka ka J ciyaaro A. Waxaa jira laba calaamadood bonus ee ciyaarta oo ay wakiil boqorka Kong oo foosto alwaax by.
Wild Astaanta: foosto ayaa waxa uu calaamad u duurjoogta of this naadi bonus cusub online ciyaarta oo ku daboola, waayo, marka laga reebo dhan boqorka Kong ah. ka muuqan doontaa dhammaan shanta duntu oo shan ka mid ah ay soo degtey xitaa siinayo inaad 500x aad saamiga.
King Kong firdhin: The calaamad boqorkii Kong waa feature kala firdhiso oo ka mid ah ciyaar iyo saddex ama in ka badan waxaa ka mid ah u furayaa muuqaalada bonus. Waxaa jira afar muuqaalada gunno oo kala duwan oo aad kala sooc lahayn abaal mid kasta oo iyaga ka mid ah. Waxay ka kooban dhigeeysa free, laablaabi iyo guul Ghanna kala duwan. Heer bonus, aad xataa u bixiyeen feature khamaar in aad ka dhigi kartaa isticmaalka a.
Tani waa mid ka mid ah ugu soo jiidashada naadi bonus cusub online sawiro cajiib ah iyo codadka. Waxaa jira dad badan oo la muuqaalada bonus in lagaaga caawiyo in aad wax ka abaal doonteen la dhigeeysa nasiib yar.